संसारकै बिहानीको देश फिजीमा भेटियो नेपाली बस्ती ! - नागरिक रैबार::Nagarikraibar.com संसारकै बिहानीको देश फिजीमा भेटियो नेपाली बस्ती ! - नागरिक रैबार
संसारकै बिहानीको देश फिजीमा भेटियो नेपाली बस्ती !
■ डिल्लीराम अम्माई
फिजी भन्ने देश कसरी बन्यो र बेलायतबाट भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि शासकहरूले फिजीको मौलिक पहिचानको विरुद्ध कसरी धावा बोले ? ४० प्रतिशत भारतीयले फिजीका आदिवासीहरूको मूल थलो कसरी कब्जा गरे ? त्योबारे यहाँ बहस गर्न खोजिएको होइन । यहाँ भारतीय ब्रिटिस कम्पनीले सन् १८७९ को मे महिनामा झुक्याएर उखुखेतीमा काम गर्नको लागि फिजी पुऱ्याइएका नेपाली (३६० जना पुरुष र २५० महिला) हरूको अवस्था, उनीहरूको चासो र जानकारीमा आएका तथ्यहरूबारे बहस गर्न खोजिएको हो ।
दक्षिण प्रशान्त महासागरको बीचमा रहेको ३३३ टापुहरूको देश फिजीमा नेपाली मूलका मानिसहरू पनि बसोवास गरेको कुरा हालै प्रकाशमा आएको छ । ९ लाख १९ हजार १९ जनसङ्ख्यामध्ये करिब १२ हजारको सङ्ख्यामा नेपालीहरू ४ पुस्तादेखि फिजीमा बसोवास गरिरहेको तथ्यलाई बाहिर ल्याउने अस्ट्रेलियन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक तथा वल्र्ड पिस काउन्सिलका दूत राजन शर्माप्रति जति आभार व्यक्त गरे पनि थोरै हुन्छ । उनले फिजीमा बसोवास गर्ने नेपालीको भोगाइबारे धेरै तथ्यहरू बाहिर ल्याइदिएका छन् ।
त्यहाँ बसोवास गर्ने नेपालीले अहिलेसम्म आफ्नो पहिचान पाएका छैनन् । इतिहासको त्यो औपनिवेशिक कालखण्डमा घोलिएको विषले उनीहरूको भाषा र वेशभूषा मात्र खाएन नेपाली पहिचान नै खान पुग्यो । फिजी पुऱ्याइएको नेपालीको पहिलो पुस्ताले आफ्नो मातृभूमिलाई सम्झेर बेलायती कारिन्दाको रूपमा काम गर्नुबाहेक नेपाल जीवनकालमा कहिल्यै फर्कन पाएनन् । त्यो पुस्ताले नेपाली कामदारबारे तात्कालिक नेपाल सरकारसँग कुनै सम्झौता नभएकोले बलजफ्त भिराइदिएको भारतीय मूलको परिचय बोकेर फिजीमा आफ्नो इहलीला समाप्त गरे । अर्को पुस्ताले पनि नेपालसँग जोडिने विश्वासिलो आधार पाएन । आफ्नो मातृभूमिलाई सम्झना र पीडाका आँसु समर्पित गर्दै सेरोगेट आमाको काखमा उनीहरूले जीवन समर्पण गरे ।
त्यसपछिको पुस्ताले आफ्नो बुबाले भनेका नेपालका कथाहरू सुने, तर राज्यबाट अपहेलित हुने भयले नेपाली भाषा र भूषालाई कायम राख्न सकेनन् । पुरानो पुस्ताको नेपालसँगको आत्मिक श्रद्धा पनि समयक्रममा कमजोर हुँदै गयो । नेपाल, आमा, बुबा, दिदीबहिनी, भात, टोपी, हिमाल, पशुपति, बुद्धजस्ता केही शब्दमा मात्रै उनीहरूको नेपाली भाषिक ज्ञान खुम्चिइसकेको देखिन्छ । त्यो उनीहरूले चाहेर भएको होइन । नेपालीको परिचय लुकाएर बेलायतीहरूले फिजी पुऱ्याएका थिए । उनीहरूलाई कलकत्ता बन्दरगाहबाट भूदास ग्रिबिटियाको रूपमा झुक्याएर त्यहाँ लगिएको थियो ।
जानकारीमा आएअनुसार उनीहरूले अझै पनि त्यहाँ नेपाली चाडपर्व, सामाजिक संस्कार र परम्परालाई नेपाली शैलीमा धानेका छन् । अघिल्लो पुस्ताको नेपालसँग जोडिने चाहना अझै पनि तीव्र छ । यदि उनीहरूले नेपालमा सम्पत्तिको अधिकारलाई कानुनी आधार दिने हो भने नेपालमा आफ्नो घर बनाएर आफ्नै वंशको रगत दिने आमाको काखमा मर्न चाहन्छन् । फिजीको राजधानी ‘शुभ’देखि १७० किलोमिटर पूर्व रहेको सिगाकोटा र काभानान्गासाउमा आफ्नै आराध्य देव पशुपतिनाथको मन्दिर बनाएका छन् । त्यहाँका नेपाली महेशदत्त शर्मा, सुधीर शर्मा, प्रवीणदेव घर्ती, विक्रम सिंह (१०० वर्ष), मान सिंह (८९ वर्ष) हरूको अझै पनि नेपाली बनेर मर्ने धोको छ । त्यहाँ राई, लिम्बू, शेर्पा, सापकोटालगायत थर भएका नेपाली पनि रहेको प्राध्यापक राजन शर्माले बताएका छन् । नेपालीको घना बस्ती भएको सिगाटोका र हेलम्बुबाहेक केही नेपाली बस्तीहरू भिटी लेभु, भानुआ लेभु, लाबासालगायतका स्थानमा समेत रहेको राजन शर्माको खोजले देखाउँछ ।
फिजीमा अधिकांश नेपालीको जीवनस्तर उच्च–मध्यमस्तरको रहेको देखिन्छ । मूलत: किसान नै रहेका त्यहाँका नेपालीहरू टापुको विकासको एक हिस्सा बनेर रहेका छन् । फिजीले संसारमा एक विकसित देशको हैसियत बनाइसकेकोले त्यहाँका अधिकांश नेपाली शिक्षित छन् । उनीहरूको मूल समस्या भनेको पहिचानको समस्या हो । किनकि उनीहरू हरतरहले आफ्नो मूल थलो नेपालसँग जोडिन चाहन्छन् । हालसालै उनीहरूले आफूलाई नेपालसँग जोडिन नेपाल–फिजी एसोसिएसन नामक संस्थासमेत वैधानिक रूपमा गठन गरेका छन् ।
इतिहासका तथ्यहरूबाट के पनि शङ्का लाग्दछ भने बेलायती उपनिवेशकालमा नेपालीहरू फिजी, म्यान्मार, ब्रुनाईबाहेक दक्षिण अफ्रिका, फोकल्यान्ड, अर्जेन्टिना, मलेसिया, इन्डोनेसिया, टिमोरलगायत धेरै देशमा लगिएको हुन सक्छ । नेपालीहरू आफ्नो पहिचानको खोजीमा फिजीमा जस्तै मानसिक प्रताडना खेपेर बसेका हुन सक्छन् । जुन नेपाल सरकार, कूटनीतिक नियोग र एनआरएनएलगायतको खोजीको विषय बन्नु आवश्यक छ ।
के उनीहरू नेपालसँग जोडिन सम्भव छ ?
भावनात्मक रूपमा उनीहरू नेपाली छन् । भाषा भुले पनि उनीहरू पुनः सिक्न चाहन्छन् । चाहनाले भन्दा बाध्यतावश उनीहरूलाई पराईले विष पियाएको तथ्यहरूले बताउँछ । मर्ने बेलामा नेपालको एकमुठी माटो ढोगेर मर्न चाहन्छन् उनीहरू । नेपाल र नेपालीहरूप्रति अगाध स्नेह र सम्मान छ उनीहरूको, त्यसैले उनीहरूलाई नेपाली होइनन् भन्न मिल्दैन । उनीहरूको भावनामा नेपाल र नेपालीको माया, सद्भाव र भ्रातृत्व छ भने आफ्नी आमाको काखमा जान खोजेको सन्तानलाई कानुनी आधार बनाएर भित्र्याइनुपर्छ । कदापि रोक्नुहुँदैन । उनीहरूले आफ्नो देशसँग जोड्न आफू बसेको गाउँको नाम नै हेलम्बु राखेका छन् । त्यो नाम राख्नुको कारण ‘म नेपालमै छु’ भनेर आफ्नो मन बुझाउनु हो । त्यसमा नेपालप्रतिको मनोवैज्ञानिक श्रद्धा लुकेको सहजै देख्न सकिन्छ । अझ छुटेको परिवारसँग १४० वर्षपछि पुनर्मिलन गराउन सके कति आभारी हुन्थे होला उनीहरू । उनीहरू सम्पन्न छन्, तर पहिचानबिना । त्यो पीडा उनीहरूलाई बाहेक अरू बढी कसलाई पो थाहा होला र ! हाम्रो राष्ट्रियताको एक टुक्रा फिजीको काभानान्गासाउ र हेलम्बुमा इतिहासको विष पिएर बसेको छ भन्दा कुन नेपालीको चित्त नदुख्ला र !
के नागरिकता बोक्ने मात्र हुन् त नेपाली ?
कसैले बलजफ्त बाबुबाट छुट्टिएर फोकल्यान्डमै आफ्ना केही पुस्ताहरू बिताए । कोही आमाबाट अलग बनाएर फिजीको लम्फासा टापुमा अवस्थित सिगाटोका पुऱ्याइयो । उनीहरू सयौँ वसन्तहरू पारिवारिक विछोडले मातृभूमि सम्झँदै बिताए । सम्झनाको प्यास मेट्न आफ्नो गाउँलाई हेलम्बु नाम दिए । नेपाल बिर्सन खोजे, तर सम्झना र सपनाले बिर्सन दिएन । त्यस्ता सन्तानलाई कसैले नेपाली होइनन् भन्न मिल्दैन । उनीहरूको भावनामा नेपाल छ, सपनामा नेपाल छ र नेपालसँग सधैँ जोडिएर रहने धोको छ ।
नेपालमा बसेर देश लुट्ने लुटेरा, नेपाली चेलीलाई अरब र अफ्रिकाका अँध्यारा गल्लीहरूमा बेच्ने अपराधीले नागरिकता बोकेर देशको मुखमा कालो पोतिरहेका छन् । ती विदेशी खातामा कालो धन थुपार्नेहरूभन्दा प्रवासमा बसेर नेपालको भलो चिताउने नेपाली दाजुभाइ महान् छन् ।
सरकारले चाह्यो भने बर्मेली नेपालीलाई राजा महेन्द्रले जसरी आफ्नो थातथलो दिलाए उनीहरूलाई पनि गर्न सक्छ । नेपालसँग जोडेर उनीहरूले फिजीमा उखुलगायत कृषिमा गरेको उन्नतिको रहस्य नेपाल भित्र्याउन सक्छ । साम्राज्यवादीहरूको बँधुवा मजदुरको रूपमा बिदेसिन बाध्य बनाइएको र इतिहासले ठगेको नेपालीलाई पुनः आफ्नो पहिचानको सहयात्री चुन्न सक्छ । साथै साम्राज्यवादी अभिशप्तबाट मुक्त गर्न सक्छ ।
अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा, राष्ट्र, राष्ट्रियताको सीमा मनमा हुन्छ, उसको परम्परागत संस्कार र पहिचानमा हुन्छ भने राज्य र देशको सीमा भूगोलमा । अतः आफ्नो भूगोलमा निर्वाध सम्पर्कको लागि राष्ट्र (जनता) र राष्ट्रियता (पहिचान)ले जोड्दै दैवको कुचक्रले पिल्सिएका उनीहरूलाई नेपाली भन्न अब ढिला गर्नुहुँदैन । यो विषयमा नेपाल सरकारले पनि फराकिलो नीति बनाउनु जरुरी छ । राज्य मानवनिर्मित भूखण्ड हो र त्यसको आधार पहिचान हो भने राष्ट्र, देश, राष्ट्रियता र राज्यको परिभाषालाई मिसमास गर्न पाइँदैन । एनआरएनएहरू पनि भोलिका फिजी मूलका नेपालीझैँ पहिचान खोज्ने सङ्घर्षमा पुस्तौँपुस्ता भौँतारिने दिन नआओस् भन्नका लागि राष्ट्र, देश, राष्ट्रियता र राज्यबारे स्पष्ट नीति बनाउन सरकारलाई दबाब दिने र आफैँले पनि आफूलाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।
अन्त्यमा, नेपाली देश रहुन्जेल मात्र देशसँग जोडिने हो, देश मेटिएपछि जोडिने आफ्नो समुदायसँग हो । त्यो समुदाय नै त्यो बेला अदृश्य राष्ट्र बन्दछ जुन भावनामा मात्र सीमाङ्कित हुन्छ । हामी एनआरएनहरूले यो कुरा महसुस गर्न थालिसकेका छौँ । हामी सीमारहित देशमा फिजीका नेपाली मात्र होइन, हाम्रो पहिचानसँग सम्बन्धित संसारको कुनाकुनामा बाध्यताले च्यापिएर बसेका सबै ज्ञात–अज्ञात नेपालीलाई जोड्न प्रयत्न गरौँ । अब कसले कति कमायौँ त्यसको हिसाब गर्दै गरौँला, राष्ट्र र पहिचान दबाएर बसेका हाम्रा आफन्त जोड्न के गर्दै छौँ त्यसले नै इतिहासमा महत्व राख्नेछ । गुलाब जहाँ फुले पनि गुलाब भएरै फुल्दछ । जानी–नजानी फिजीका हाम्रा दाजुभाइ चौथो पुस्तामा समेत नेपाली भएर फुल्ने साहस गर्दै छन् । उनीहरूको नेपालसँग जोडिने र नेपाली बनेर मर्ने महान् सपना पूरा होस्, शुभकामना !
दोस्रो एकदिवसीय खेलमा अफगानिस्तान पराजित
अति भयो अब केही विकल्प अपनाईदेऊ सरकार
अति भयो अब केही विकल्प अपनाईदेऊ सरकार मेरो पनि सरकार छ भन्ने भान जगाईदेऊ सरकार नागरिकहरु रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था भयो बरु मिल्छ भने भोक नै नलाग्ने दवाईदेऊ सरकार दिनभर परिश्रम गरेर मात्र छाक टार्न पुग्नेहरुलाई बिना अन्न खाना पाक्न मिल्ने सलाईदेऊ सरकार विज्ञापन हाम्रो त कोहि छैनन आफ्नतहरु सिंहदरबारमा पनि बिन्ति कार्यकर्ता हैन […]
दिन कटाउन होइन केहि गर्न आएकि हुँ -विनिस्ता धामी
दिन कटाउन होइन केहि गर्न आएकि हुँ । खालि दिमाग मा केहि भर्न आएकि हुँ।। झुल्किएनन कैहिल्य जहाँ सुर्यका किरण त्यहि अध्यारो मा उज्याल़ो छर्न आएकि हुँ। विज्ञापन माटो मा जन्मे माटो मा हुर्किए म धर्तिकै निम्ति हाँसि हाँसि मर्न आएकि हुँ।। नसोध दु:ख कस्तो हुन्छ भनि मलाई । दुइ/चार दिन भोकै बसि उकाली ओराली […]
रामबहादुर विकका मनछुने वेदनाहरू
हासो अनि खुशी लाई शीत देखे आज फेरि ! निरासामै गजल अनि गित लेखे आज फेरि !! मुस्कान जति धुवाएर आकासिदै बिलाउदा ! साथ दिने आशुलाई मीत देखे आज फेरि!! कोहि काख कोहि पाखा दैबको खेल यस्तै रैछ ! विज्ञापन यस्लाई नि संँसारको रित लेखे आज फेरि !! लेख्नु पर्ने हारै थियो , नढाटेर लेख्नु […]
तिम्रा तस्वीरहरुलाई अहिले गधा र बाँदरहरुले घेरिरहेछन् । मैले तिम्रो तस्वीरमा माल्यार्पण गर्न सकिन । गधा र बाँदरहरुको घेराबाट बाहिर अलि टाढा उभिएर प्रिय मार्क्स म तिम्रो संकटग्रस्त तस्वीर टोलाइरहेछु । विज्ञापन कुनै पनि बेला ती बाँदरहरु गधाहरुको ढाड चढ्नेछन् र च्यात्ने छन् तिमीलाई । म त एउटा निहत्था गरिब मान्छे हुँ प्रिय मार्क्स जो […]
उजाड यो मरभुमिमा आउनु भयो कसरी-कसरी सम्झनामा कामहरु राखी छोड्दै हुनुहुन्छ कसरी-कसरी । विज्ञापन मिठो रसिलो बानी त्यसैमा पिडित महिलाका भगवान तपाई । सुरिलो धुन संगै जानुहुन्छ तपाई छुट्टिने कसरी-कसरी । लाख भित्र एक भेटे त्यसैमा कामका काजी तपाई १४ महिना ८ दिनमा गरेको प्रगति भुल्ने छैन समाजले बाचु कसरी-कसरी । साञ्चै […]
रुगुम खड्का समर्पणका गजलहरु !
घुम्दैफेर्दै तिम्रो गाउँमा झरेको दिन याद आयो ! तिमी सँगै प्रेम जालमा परेको दिन याद आयो !! अन्याएसै नजर जुध्यो पिपलपाते ओठ सँगै ! मृगेनीका नयन तिमिले तरेको दिन याद आयो !! कोकिलकण्ठि स्वर तिम्रो चन्द्रमुखि मुहार सँगै ! हेर्दा हेर्दै तिमी मन परेको दिन याद आयो !! बगरको माछासरी हुन्थ्यो केहि दिन छुट्नुपर्दा ! […]
रेडियो बुढीनन्दाकाे स्टेशनमा अागलागी